Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda oo Mooto Bajaajle Caawa ku dilay Isgoyska EVECO ee Jidka Warshadaha – Banaadir weyne
Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda oo Mooto Bajaajle Caawa ku dilay Isgoyska EVECO ee Jidka Warshadaha
12 Juunyo, 2018
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goordhow uu dil ka dhacay Wadada Warshadaha oo ah meel ay ku badanyihiin Ciidamada Nabad Sugida Somaliya.
Goob Joogayaal ayaa soo sheegaya in dilka uu ka dhacay Isgoyska EVECO oo ku dhow Warshada Taraqa & Sigaarka ee Wadada Warshadaha, Dilka oo askari geystay ayaa durbadiiba waxaa usura gashay inuu goobta ka baxsado.
Warar is qilaafsan ayaa ka soo baxaya qaabka dilka uu udhacay, Wararka qaar waxey sheegayaan in askariga dilka geystay uu rasaasta dad kale ku kala eryayay balse ay Bajaajlaha qabsatay, halka Warar kalena ay sheegeen in Muran soo kala dhex galay Bajaajlaha iyo askariga ay keentay inuu si bareer ah u toogto.
Halka dilka uu ka dhacay oo laga ilalaiyo Muqdihso Inteeda kale, ayaa waxaa la geeyay Ciidamadii NISA ee Wadada Maka Al-Mukarama iyo Wadnaha Gawaarida iyo dadka ku baari jirtay ee Jid cadayaasha uxirnaa.
Bajaajlaha la dilay ayaa markii danbe meydkiisa laga qaaday Goobta, waxaana baaris la xiriira soo qabashada askariga dilka geystay wada Ciidamo katirsan Xasilinta Caasimada.
Dilalka loo geysto Wadayaasha Mootooyinka Bajaajta ayaa ku soo badanaya Magaalada Muqdisho, waxaana Bishan Ramadaan oo kaliya la dilay 4 Bajaajle, Dilkii uu dnabeeyay waxaa isla Bajaajle loogu geystay halka Caawa dilka uu ka dhacay ee Isgoyska EVECO.
EVECO, ayaa ah Barta Kontorool ee ug adag Ciidamada ee Baarista ku sameeyaan, Waxeyna Gaadiidka u ogolyihiin iney baxaan, balse looma ogola in gawaarida ka soo gudubto. – Universal Somali TV